Real Wongororo "Uniastrum Bank" (LLC)
History of Bank "Uniastrum" kuvapo kwazvo kuratidza socio-upfumi mamiriro ezvinhu kuti kwakasimbiswa muRussia mumakore 20 apfuura. Tsika zvemari akasikwa 1994. Panguva kushanda nayo kwapfuura mumatanho dzakawanda kukura, kuti nhasi kunoita kuti titaure pamusoro isimbe kwayo, kuchinja mitemo kutendeseka uye rakavimbika.
The huru Danho iri kukura kwesangano rakanga kuitwa muna 1996 mune Russian muripo mugadziriro Union Card. Nhasi mutengi ose anoedza kusiya nezve "Uniastrum Bank" yokudzokorora. kutangwa rezinesi rwaiwanikwa muna 1997. Panguva ino, zvakanga chakagamuchirwa kuhondo pakati penhengo guru racho Stock Exchange. Kubvira muna 1998, "Uniastrum Bank" - nhengo Moscow Interbank Stock Exchange, zvakamupa mukana Currency kwema kunze. Kubvira muna 1999 ave ari remunharaunda richikurukura mahofisi, izvo zvino vari Russia kune vanopfuura 100 mumaguta 60.
Pamusoro Kururama rakasarudzwa gwara "Uniastrum Bank" rinoratidza kugamuchirwa kwayo muna 2001 sezvo nhengo World interbank hurongwa KURUMIDZAI. Kuziva professionalism iri chikwata, vaitungamirira tsika yakanga nomukova wayo muna 2002 mune dzakawanda muripo mugadziriro Visa International.
Nhasi, ari mvumo guta guru "Uniastrum Bank" - 5.900.865.000 rubles. Customer Reviews kuti "Uniastrum Bank" anoratidza kuti sangano iri - a vakaziva mutungamiri mumunda kushanda navaduku uye svikiro kadikidiki bhizimisi. Vakaita zvizere siyana rwezvemabhengi mabasa, kusanganisira anomukweretesa. Anokwezva, bhengi kunoita professionalism uye basa rayo nomudonzvo, izvo anobvumira kuti kukurumidza uye kusanduka kugadzirisa vatengi. Uyewo, "Uniastrum Bank" - the ubatanidzwe wegadziriro fanira dhipoziti inishuwarenzi kubva 2004.
Mu "Uniastrum Bank" rinopa zvitatu nokuda deposits kuti vanhu. Vanogona kuva zvose rubles uye madhora, euros. Mapurogiramu dhipoziti The musiyano iri shoma mari mubhangi, chimbadzo uye izwi anogona kugutsa zvinodiwa zvose Mapato vokuparidzira mubasa iri. Reviews anoratidza kuti kuchengeta mari dzavo anogona vanhu vane nezvaanogona zvemari zvakasiyana.
Very dzakakurumbira ndiwo mupiro "kubva muzana guru". Chirongwa rakagadzirirwa anenge 1 gore pamwe mukana otomatiki kuvandudzwa. Nomupiro zvinobvira muna rubles, madhora, euros. Shoma kuwanda dhipoziti mudzimai mari ndiyo mamiriyoni 20 (vatorwa - 2 fung.). The vaifanira - mamiriyoni 1 rubles (madhora, euros - 500 ths.). Mwero mupiro wokuRussia mari - 8,75%, muna US uye Europe - 1.5%, kuripwa iro rinoitwa panguva pakuguma dhipoziti izwi.
Customer ongororo vanoti kuita mupiro "Social." Chirongwa ane zvimwe kusanduka nguva puranga kubva pamazuva 181 kusvika makore maviri. The interest of Ruble dhipoziti dzinosiyana-siyana zvichienderana nenguva - kubva muzana 8 kusvika 9 muzana annum. The dhora uye euro iri kazhinji kugadzikana uye kubva muzana akaenzana mumwe. Uyezve, chipo ichi anopa nokuda kwokuripirwa mubereko prices iri pamwedzi hwaro.
Panguva iyoyowo mupiro "Universal" Anonziwo yaizoongororwa chokwadi. It rakagadzirirwa vatengi vari kushumirwa chirongwa "A guru ndivo." The nguva yaro sunungukei pekugara: kubva pamazuva 91 kusvika 1 gore. Kufarira for NZD zvichisiyana 10% kusvika 11,75%, uye Euro madhora - kubva 1,2% 2%. Kufarira kubhadhara dzinoitwa mwedzi wose.
Maererano mupiro "kudiwa" chinhu pamusoro chirongwa ichi chete vatengi vanorumbidza "Uniastrum Bank" rinogona kunzwika. Maererano navo, zvinoita kuti zvakanaka kutarisira mari uye kushandisa pasina kurambidzwa kana zvakakodzera. Kufarira for rubles 1%, mune madhora - 0.5% euro - 0.2%. Monthly kubhadhara uyewo.
Deposits nokuti pamutemo masangano
Nokuti chikamu ichi mamwe zvirongwa zvakatangwa:
Deposit "mari kunonyanyisa". Izvi mhando mubhangi zvinopa mukana kuisa mari yavo rubles kuti mazuva 7 kuti mwedzi 12, mari uye euro - kubva pamazuva 61 kusvika 1 gore. "Uniastrum Bank", wongororo iyo inobatsira nekukura kukurumbira kwayo pakati vatengi, kupa kufarira for rubles, kubva 8.5% muna Maeuro nezviratidzo madhora, vanotanga pa 2.25%.
"Business Approach" dhipoziti. Rakagadzirirwa 1 year. Kufarira rate pamusoro deposits mu rubles kubvira 8.25% kugumisa 11%. Kana isu kufungawo dhora uye euro - kubva 0.75% kusvika 3.75%. Papurogiramu vanoitwa hunodzorwa nyaya dzinovaka. "Uniastrum Bank" nguva dzose anoenda akananga dzose vatengi. Kana nokuvhura dhipoziti iri uwandu mamiriyoni 1 vachibhejera zvinhu ichagadziriswa nomumwe.
Deposit "Active Capital (Rublyovy)." Deposits iyi mhando zvakaitwa chete rubles. Rokuti placement mari - 1 gore. Interest - 10.5%. Kana mangwanani haasaruri Anonunura zvinoreva kunoderedza. Izvi runoratidzwa wongororo. "Uniastrum Bank" anokoshesa vatengi yayo kuti vanoomerera zvinhu chesungano. Kubhadhara dzinoitwa pamusoro dhipoziti panguva pakuguma dhipoziti nguva.
Deposit "Active Capital (USD-Euro)». Chirongwa chakagadzirirwa kakawanda pamusoro deposits mune madhora uye euros. dhipoziti mazwi kubva pamazuva 31 kusvika 1 gore. Reviews pamusoro deposits "Uniastrum Bank" kureva kuti kufarira prices vari dzaona zvichienderana nenguva rikaisa dhipoziti uye zvinobva 1 kusvika 3.5%.
Chikwereti zvirongwa vanhu
"Uniastrum Bank", wongororo izvo zvinowanikwa nhau, chinonyanya kukosha vatungamirire basa anobvuma mutengi anomukweretesa. Tsika zvemari inopa zvakawanda mabasa munzvimbo iyi. Huru chirongwa chichaitwa kurondedzerwa pazasi.
Chikwereti "Available". Izvi mhando inowaniswa asiri mari abhadhare zvinhu uye mabasa kuti nguva kubva 1 kusvika 60 mwedzi. chibvumirano chitsama yemakomo kubva 10 kusvika 500 zviuru rubles. Kufarira rate vowanda zvichienderana kuwedzera kukura ari chikwereti uye vari kubva 16 kusvika 41,3% chete annum. Izvi mhando anomukweretesa kunopa upenyu uye utano inishuwarenzi yacho anokwereta, pangava kurasikirwa basa.
Credit "Corporate". Chirongwa rakagadzirirwa nemakasitoma-yokuisira pakati epurasitiki nemakadhi kubhangi, kuva akanaka chikwereti nhoroondo. akadzika "Corporate" chikwereti chinangwa uwirirane zvinangwa "Available". chibvumirano chitsama zvichisiyana zviuru 10 rubles kusvika mamiriyoni 1 rubles. Kufarira rate vari kudzika pane muzvirevo pasuru uye siyana 15 kuti 32,6% chete annum. chirongwa ichi rinopawo inishuwarenzi.
Credit "sanganisira." Huwandu pasuru iyi chakagadzirirwa kubva 500 zviuru mamiriyoni 1 rubles. Kufarira rate siyana 14.9 kusvika 22.9%. Miti iri rinopa upenyu uye utano inishuwarenzi yacho anokwereta, pangava kurasikirwa basa. Kana uchitenda mutengi inofambiswa, chirongwa kwakakurumbira chaizvo.
Credit "rakavimbika shamwari." Huwandu pasuru iyi anoda kubva zviuru 10 kusvika 1 miriyoni rubles. "Uniastrum Bank" anopa kufarira prices izvo kuvimba, sezvo ari yapfuura chikwereti pasuru kubva Kukura (kubvira 1 kusvika 60 months), uye vari mukati 13,5-26,6% pa annum.
Sezvo chikamu chikwereti-anomukweretesa chatinokoshesa, zvainanga pave diki uye svikiro kadikidiki bhizimisi. "Uniastrum Bank" iri kutungamirirwa panorongwa. Vanopa guta nokuda kusimudzira entrepreneurial basa pamisika, kuwedzera zvokudya Retail, resitorendi mabhizimisi. Uyezve, basa ravo rinoita kuti issuance yemutoo wezvikwereti kune landlords, avo zvainanga kukura dentistry, runako bhizimisi, Pharmaceuticals. Vachishingaira kushanda munzvimbo idzi, "Uniastrum Bank" (Armavir). Nyanzvi Guest vanoti zvirongwa zvakadai zvinoita kuti kuwedzera kuwanda diki uye svikiro mabhizimisi yose.
Credit zvebhizimisi kukura
Anoedza zvinodiwa vatengi ayo, "Uniastrum Bank". Basa, wongororo zvacho zvakawanda zvakanaka, zvainanga mabhizimisi rutsigiro. It anotakura nemagariro rinotsanangura. Izvi mhando anomukweretesa chinhu ichiita mabasa akawanda, yakagadzirirwa kusimudzira diki uye svikiro emakambani ari Implementation pfungwa dzavo. In yechinangwa uwandu rubles anosvika mamiriyoni 50, ari chimbadzo rinotanga pa 18.1% pa annum. Izvi mhando chikwereti chinogona yakapiwa munhu wechisikigo munhu. Chikwereti izwi - kusvika 96 mwedzi. chibvumirano ichi anopa tichisunga rubatso chinjwa uye usingazungunuke pfuma.
Special pfungwa mbiri nokuda chitoro kutengeswa chikafu. The chibvumirano inogona akagumisa kuti rubles anosvika mamiriyoni 20. Its chimbadzo rinotanga pa 18.1% pa annum. Nguva iyo Mwari akaronga - vaifanira kubva 96 mwedzi. The chikwereti iri rakapa pasi chikwereti kuita kuti mukwereti. Mukuwedzera, vanenge pagore uye ake basa anofanira kutanga basa angabatsira. Feedback kubva mudonzvo "Uniastrum Bank" kuratidza kukosha uye kudiwa kwakadai anomukweretesa.
Issuance kuti guta kusvikira varidzi muresitorendi mubhizimisi, Retail repair nhengo, matai uye mavhiri, runako Salons nevezvimwewo anoitwa pasi chete ezvinhu. Excellent ezvinhu bhizimisi rinopa "Uniastrum Bank". Reviews Vashandi zvinoratidza kuti zvirongwa zvakagadzirirwa zvakasiyana vatengi zvinodiwa.
Credit mutsetse nokuti landlords rakagadzirirwa anosvika mamiriyoni 50 rubles kwenguva 96 mwedzi uye chimbadzo kubvira 18% pa annum. The prerequisites kuti chikwereti anokwereta, kuti vimbiso Fund kutsigirwa zviduku uye svikiro kadikidiki bhizimisi, uyewo mamwe rubatso chakasimba chekuchengetedzwa muchimiro chinjwa pfuma. Nokuti varidzi chemishonga uye mazino bhizimisi "Uniastrum Bank" kwakatanga zvaunoda chikwereti mazwi. mamiriro avo akafanana kuti apa marudzi Entrepreneurs. kuti basa anokwereta wacho zvinodiwa nyore: kushanda dzinenge 2 makore profitability. chikwereti ichi inopiwa Real Estate.
Nokuti pamutemo masangano Zvinogonekawo zvikwereti pfupi-izwi richengetwe ne chinjwa pfuma. The kunonyanyisa chitsama rubles mamiriyoni 20, ari kutanga interest - kubva 20,1% chete annum, kufadza izwi - mwedzi 36. The chibvumirano inogona akagumisa pasi zvimwe zvinhu: rubatso chinjwa pfuma, rubatso yokupira masangano uye Fund kuti Rutsigiro Muduku uye Medium Business. Get chikwereti achava zvinogoneka kuna kana entrepreneur mabasa asina asingasviki 24 mwedzi uye mari kwayo niche.
Anokweretesa yemakambani vatengi
"Uniastrum Bank" anoteerera zvikuru pamwe yemakambani vatengi. Mose Kudyidzana - kiyi profitability. The Bank kwakasimbiswa munhu U-Business Prime chirongwa, pasi izvo akapa zvikwereti kune yemakambani vatengi kusvika 96 mwedzi iri mari rubles mamiriyoni 20 ane kutanga mwero 17% pa annum.
Nokuti chipfuro ichi vateereri rave zvakagadzira purogiramu wezvokutengeserana uye anoruka zvikwereti. Muchiitiko chokutanga vari unozvipiwa kusvika 1 year, rechipiri - kusvika makore 7. Kuti vawane guta akadaro anofanira kuva contractual kwemitoro nezvavatorwa kambani-ekisipota. Munzvimbo iyi inopa anoyevedza ezvinhu nokuda kwoUmambo "Uniastrum Bank". Customer inofambiswa kunoratidza kuti chirongwa mbiri aibvumirwa kuva muna aida akananga bhizimisi. Tsika zvemari kare kuenzana zvakakomba yemakambani yeGmail.END_STRONG chawo, izvo zvinopupurira rakavimbika.
Mamwe mabasa kune vanhu
The Bank inopa mabasa nebumbiro dhipoziti bhokisi uchingoti navo vari yakachengeteka dhipoziti bhokisi rendi kukarukureta-mari michina uye mari detector. Uye tichibatsirwa rokushandura uye authentication kuti mari inokwana, kuchinja mari uye mari, muunganidzwa uye kutakurwa zvinokosha. "Uniastrum Bank" Anonziwo chinozoiswa Panodyidzanwa purogiramu mumagariro inishuwarenzi uyewo upenyu, utano, pfuma uye vehurumende basa mutengi.
Mamwe mabasa pamutemo masangano
Sezvinoratidzwa wongororo, "Uniastrum Bank" inopa Implementation kuti muhoro kubhadhara pamusoro akanaka mashoko ayo yemakambani vakaroorana. Kuita Payroll chirongwa kuchaita yakachengeteka kudzivisa uori pamwe mari, kutsakatisa kudiwa kutakura mari, kunoita pachena remapazi, zvemari vawedzere mutengi mikana anoonga kuvhurika kadhi rechikwereti.
"Uniastrum Bank" kuti yemakambani vatengi kuti tiite anoreva nhema mabasa. Anoreva nhema zvigadzirwa zvinosanganisira pfuma chaiyo, midziyo, motokari. Attractively wakashongedzwa anoreva nhema kutengeserana mubhangi nokuda yakaderera kufarira rates, refu mashoko mari, zvingangoita kunyoresa pasina mberi kana waita rubatso.
Anovandudza uye unoshanda ne "Uniastrum" Akapiwa nguva kuitika. Guest mipiro zvinoratidza kuti chinonyanya nyore ndechokuti kupfungwa electronic shanduro. Saka, zvinovawo zvinobvira kuita nenguva chaiyo, chero rwezvemabhengi kwema ari Gadget ake pasina kushanyira hofisi dzemapazi. Zvakanaka zvingangoguma pachavo kudzora vachibhadhara zvose. Happy vatengi uye pasina chero makomisheni, mashoko ouchenjeri yavaive nguva. Nokupfupikisa, tinogona kutaura nechivimbo pamusoro rakavimbika, Kuwanikwa Bank "Uniastrum" uye akakurudzira kuti pamwe kune vose vanhu uye dzepamutemo masangano.
Chinonyanya kukosha chokuratidza ndiko kuvimbika, kana isu funga "Uniastrum Bank" kureva. Nyanzvi Guest anoratidza kuti pakutanga 2016 tsika yavose sezvavakatarirwa akatsiga. The yeGmail.END_STRONG nehwaro "Uniastrum Bank" ane diki uye svikiro kadikidiki mabhizimisi vanopfuura zviuru gumi nezvisere. Uyezve, nokuti 2009, tsika zvemari anonzi zvikuru mupfungwa nemishonga mabhanga maererano National Award. Muna 2010, ivo Bank akanyora zvakafanana mubayiro nokuda yakanakisisa chitoro chikwereti. 2013 aizivikanwa pakagadzwa nokuda mubayiro nokuda pakatanga ano rwezvemabhengi michina.
Mumwe vasingagutsikani mutengi uyewo uderedze kusiya nezve "Uniastrum Bank" yokudzokorora. Rezinesi nhamba 138-00180-211400 kunoratidza kuti pakagadzwa unoshanda pamutemo. Asi vanhu vanoti kuti matambudziko kunowanzoitwa chokuita tinobatwa basa vashandi vamwe mahofisi. Zvinosuruvarisa, kwete vanhu vakawanda nhasi vari mari kuverenga. Nezvoupfumi mahofisi vanofanira kupa zvakazara ruzivo pamusoro dhipoziti uye neanokweretesa zvirongwa. Kana ichi hachina kuitwa nenguva nenzira, pane kusanzwisisa pakati kubhengi uye nemhosva. Uye somugumisiro - kunaka.
Zvaidiwa okuti chesungano - danho kune rimwe pamwe chete sangano zvemari unobereka. Nyanzvi siya dzinovaka yenyu. "Uniastrum Bank", vanoti, kupa zvakakwana anoyevedza mashoko, kana kuti kuita tichienzanisa nemamwe masangano akafanana.
Bank kugarwa uye mari basa zviri pamutemo masangano
Pusa kushanda pamahombekombe
Chii ATF Bank Almaty?
Bank kadhi kwemari: Rating, maonero, mamiriro ezvinhu uye wongororo
"TCB": kutenga ongororo, description, mabasa, upfumi uye zvikwereti
13 chokwadi kubhangi anogona kuziva hwako
Low-mafuta Pancakes - danho rokutanga kuti zvakanaka kunovaka muviri
Akasvibirira lashes: sei kuzadzisa izvi
Sei kudzidza kuchikoro zvokurapa? Features kudzidziswa muchikoro zvokurapa
Mishonga inokosha inobatsira "Folacin" pakuzvitakura
Hotel Baramee Resortel 3 * (Phuket, Patong Beach): wongororo, rondedzero uye wongororo
Somuzivi - kushandiswa panguva pamuviri zvinogoneka kana kwete?
How kuderedza uremu pamusha: mazano, unyanzvi, zano
Kudzimwa kwechikwereti chimwe simba Gweta motokari - a fait accompli
How kuchenesa kombiyuta yako zvisingakoshi mafaira pachavo?
Barstool: kukura, kuvakwa